Kitra afrikanina: resin’ny FC Platinum ny Cnaps Sport | NewsMada
Tapitra hatreo ny lalan’ny Cnaps Sport, eo amin’ny fifaninanana afrikanina, taranja baolina kitra. Resin’ny FC Platinum avy atsy Zimbaboe, teo amin’ny lalao miverina, ry zalahy, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika.
Nihintsana teo amin’ny lalao savaranonando, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Ligue des champions”, taranja baolina kitra, ny Cnaps Sport. Resin’ny FC Platinum zimbaboe, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0, izy ireo, nandritra ny fihaonana miverina, notanterahina, omaly alarobia, tatsy Harare.
Baolina tokana, tafiditr’i Rodwell Chinyengetere, teo amin’ny minitra faha-62. Niady hatramin’ny farany ny Cnaps Sport ary tena nampiseho endri-dalao nahafinaritra sy nahaliana ny mpijery zimbaboeanina. Betsaka ireo fanafihana sy ny baolina tokony ho tafiditry ny ekipa Malagasy, saingy tsy tao amin-dry zalahy mihitsy ny vintana.
Niezaka nanindry ihany koa ny FC Platinum, ary nanao totoafo teo amin’ny fanafihana, saingy nahay sy tsara fipetraka hatrany i Leda, mpiandry tsatoby malagasy. Tsy nisy ny baolina tafiditra teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Niezaka nanafika hatrany ny Cnaps, teo amin’ny fidirana faharoa, saingy tsy nety nahafaty baolina mihitsy ry Lalaina sy ry Arnaud.
Raha tsiahivina, 2 no ho 1, izany ny fitambaran’isa teo amin’ny ekipa roa tonta, teo amin’ny lalao mandroso sy miverina. Efa nisaraka ady sahala, 1 sy 1, ny roa tonta, nandritra ny lalao mandroso, natao teny Vontovorona, ny alahady 2 desambra lasa teo. Tapitra hatreo izany ny fifaninanana, ho an’ny Cnaps sport, ho an’ity taona 2018 ity.